Madaxweynaha oo cambaareeyay qaraxii Istanbul – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo cambaareeyay qaraxii Istanbul
Madaxweynaha Jamhuuriaydda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud , ayaa si adag u cambaareeyay Weerakii kooxda Argagixisada ah ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud ayaa ku tilmaayay weerakaas mid waxuushnimo ah, waxa uuna xusay in ujeedka Argagixisadu leedahay ay tahay in ay laayaan dadka maatida ah, loona baahan yahay in caalamku ay u midoowaan la dagaalan kooxaha caadeestay daadinta dhiiga dadka aan waxba galabsan.
“Anigoo ku hadlayo magaca umada Soomaaliyeed waxaan tacasi udirayaa Madaxda dowlada Turkiga iyo Shacabkii ay wax yeelada ka soo gaartay weerarka kooxda Argagixisada ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbuul,waxaana alle ugu baryaa dadkii ku dhaawacmay in alle deg deg caafimaad siiyo, ayuu yiri Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Weerarka ka dhacay garoonka diyaaradaha Istanbuul waxaa ku naf waayay 36 ruux, waxaana sido kale ku dhaawacmay 147 kale.
Tababar ka furmay wasaaradda warfaafinta
Culimada Soomaaliyeed oo deeq raashiin ah loo qeybiyay